Ud 5.3: သုပ္ပဗုဒ္ဓကုဋ္ဌိသုတ် (မြန်မာဘာသာ) - Udāna - SuttaCentral
၄၃။ အကျွန်ုပ်သည်ဤသို့ ကြားနာခဲ့ရပါသည်- အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည့်ရှဉ့်နက်တို့အား အစာကျွေး၍ မွေးရာဖြစ်သော ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ သုပ္ပဗုဒ္ဓမည်သော လူနူသည်လူတကာတို့ထက်ဆင်းရဲသူ အထီးကျန်သူ ချို့တဲ့သူ ဖြစ်၏။ ထိုအခါ၌ မြတ်စွာဘုရားသည် များစွာသော ပရိသတ်ခြံရံ၍ တရားဟောလျက်နေတော်မူ၏။
သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူသည်စုဝေးနေသော ထိုလူအပေါင်းကို အဝေးကပင်မြင်၍ ''ဤအရပ်၌ တစ်စုံတစ်ခုသော ခဲဖွယ်ကိုလည်းကောင်း၊ စားသောက်ဖွယ်ကိုလည်းကောင်း မချွတ်ဧကန်ဝေခြမ်းနေဟန်ရှိသည်၊ အကယ်၍ငါသည်ထိုလူအပေါင်းကို ချဉ်းကပ်ရမူ ဤအရပ်၌ တစ်စုံတစ်ခုသော ခဲဖွယ်ကိုလည်းကောင်း၊ စားဖွယ်ကိုလည်းကောင်း ရနိုင်ကောင်းတန်ရာ၏''ဟု အကြံဖြစ်၏။
ထို့နောက်သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူသည် လူအပေါင်းရှိရာသို့ ချဉ်းကပ်လေသော် များစွာသော ပရိသတ်ခြံရံ၍တရားဟောနေသော မြတ်စွာဘုရားကို မြင်သဖြင့် ''ဤအရပ်၌ တစ်စုံတစ်ခုသော ခဲဖွယ်ကိုလည်းကောင်း၊ စားဖွယ်ကိုလည်းကောင်း ဝေခြမ်းနေသည်မဟုတ်၊ ဤရဟန်းဂေါတမသည်ပရိသတ်၌ တရားဟောနေ၏။ ငါသည်လည်း တရားနာရမူ ကောင်း၏''ဟု ကြံပြီးလျှင်ထိုအရပ်၌ပင် ''ငါသည်လည်း တရားနာအံ့''ဟု တစ်ခုသောအရပ်၌ ထိုင်၏။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် လူမျိုးစုံပါဝင်သော ပရိသတ်ကို စိတ်တော်ဖြင့် (ပရိသတ်) စိတ်ကို ပိုင်းခြားသိ၍ ''ဤပရိသတ်၌ အဘယ်သူသည် တရားကို သိထိုက်သနည်း''ဟု နှလုံးသွင်းတော်မူ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုပရိသတ်၌ ထိုင်နေသော သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူကို မြင်၍ ''ဤပရိသတ်၌ သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူသည်တရားကို သိခြင်းငှါ ထိုက်၏''ဟု ကြံပြီးလျှင်သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူကို အကြောင်းပြု၍အစဉ်အတိုင်းသောတရားကို ဟောတော်မူ၏။ ဤအစဉ်အတိုင်းသောတရားစကားဟူသည်အဘယ်နည်း? ဒါနနှင့်စပ်သောစကား သီလနှင့်စပ်သောစကား နတ်ပြည်နှင့်စပ်သောစကား ကာမဂုဏ်တို့၏ အပြစ်ယုတ်ညံ့ခြင်း ညစ်ညူးခြင်းနှင့်စပ်သောစကား ကာမဂုဏ်တို့မှထွက်မြောက်ခြင်း၌ အကျိုးနှင့်စပ်သောစကားတို့တည်း။ ထိုစကားများကို ထင်ရှားပြတော်မူ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူ၌ ခံ့သော စိတ်နူးညံ့သော စိတ်အပိတ်အပင်'နီဝရဏ'မှ ကင်းသော စိတ်တက်ကြွသော စိတ် ယုံကြည်သော စိတ် ရှိသည်ကို သိတော်မူသောအခါ မြတ်စွာဘုရား၏ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်သိမြင်အပ်သော သာမုက္ကံသိက တရားဒေသနာတော်ဖြစ်သော ဆင်းရဲ 'ဒုက္ခသစ္စာ'ကိုလည်းကောင်း၊ ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း 'သမုဒယသစ္စာ'ကိုလည်းကောင်း၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာ 'နိရောဓသစ္စာ'ကိုလည်းကောင်း၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာ (နိဗ္ဗာန်) သို့ ရောက်ကြောင်းလမ်းစဉ်'မဂ္ဂသစ္စာ'ကိုးလည်းကောင်းပြတော်မူ၏။ မည်းနက်ခြင်း ကင်း၍ စင်ကြယ်သော အဝတ်သည်ဆိုးရည်ကို ကောင်းစွာ ခံယူသကဲ့သို့ ဤအတူသာလျှင် သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူအား ထိုနေရာ၌ပင်လျှင် ''ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသောတရားသည်ချုပ်ခြင်းသဘော ရှိ၏''ဟု ကိလေသာမြူ အညစ်အကြေးကင်းသောတရားမျက်စိ 'သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်'သည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၏။
ထို့နောက်သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူသည်တရားသို့ ရောက်ပြီးသည်ဖြစ်၍ တရားကို သိပြီးသည်ဖြစ်၍ တရားသို့ သက်ဝင်ပြီးသည်ဖြစ်၍ ယုံမှားခြင်းကို ကူးမြောက်ပြီးသည်ဖြစ်၍ (သို့လောသို့လော) တွေးတောခြင်းကင်းပြီးသည်ဖြစ်၍ မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာ၌ ရဲရင့်ခြင်းသို့ ရောက်ပြီးသည်ဖြစ်၍ သူတစ်ပါးကိုအားထား၍ ယုံကြည်သည်မဟုတ်ဘဲကိုယ်တိုင်ပင်သိမြင်ပြီးဖြစ်၍ မြတ်စွာဘုရားမှတစ်ပါး ယုံကြည်ကိုးစားထိုက်သူ မရှိရကား နေရာမှထကာ မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးပြီးလျှင်တစ်ခုသောအရပ်၌ ထိုင်နေပြီးသော်မြတ်စွာဘုရားကို -
အသျှင်ဘုရား (တရားတော်သည်) အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိပါပေ၏။ အသျှင်ဘုရား (တရားတော်သည်) အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိပါပေ၏။ အသျှင်ဘုရား ဥပမာအားဖြင့် မှောက်ထားသော ဝတ္ထုကို လှန်ဘိသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ဖုံးလွှမ်းအပ်သော ဝတ္ထုကို ဖွင့်လှစ်ဘိသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ မျက်စိလည်သောသူ့အား လမ်းမှန်ကို ပြောကြားဘိသကဲ့သို့လည်းကောင်း ''မျက်စိအမြင်ရှိသောသူတို့သည် အဆင်းတို့ကို မြင်ကြလိမ့်မည်''ဟု အမိုက်မှောင်၌ ဆီမီးတန်ဆောင်ကို ညှိထွန်းသကဲ့သို့လည်းကောင်း (အသျှင်ဘုရား) ဤအတူသာလျှင် မြတ်စွာဘုရားသည် များစွာသော အကြောင်းဖြင့် တရားတော်ကို ပြတော်မူပါပေ၏။ အသျှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်သည်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းကောင်း၊ တရားတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ရဟန်းသံဃာတော်ကိုလည်းကောင်းကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ပါ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် အကျွန်ုပ်ကို ''ယနေ့မှစ၍အသက်ထက်ဆုံး ဘုရား တရား သံဃာတော်ကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူ ဥပါသကာ''ဟုမှတ်တော်မူပါဟူ၍ (လျှောက်၏)။
ထို့နောက်သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူသည်မြတ်စွာဘုရားသည် တရာစကားဖြင့် အကျိုးစီးပွါးကို ကောင်းစွာ ပြလျက် (တရားကို) ဆောက်တည်စေကာ (တရားကျင့်သုံးရန်) ထက်သန်ရွှင်လန်း စေအပ်ပြီးသည်ရှိသော်မြတ်စွာဘုရား၏ စကားကို နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်၍ နေရာမှ ထလျက်မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးပြီးလျှင်အရိုအသေပြုကာ ဖဲသွားလေ၏။ ထို့နောက်ဖဲသွား၍ မကြာသေးသော သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူကို နို့စို့နွားငယ်ရှိသော နွားမသည်ဝှေ့၍ သတ်လေ၏။
ထိုအခါ များစွာသော ရဟန်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးပြီးလျှင်တစ်ခုသောအရပ်၌ ထိုင်နေကြကုန်ပြီးသော်''မြတ်စွာဘုရား တရာစကားဖြင့် အကျိုးစီးပွါးကို ကောင်းစွာ ပြလျက် (တရားကို) ဆောက်တည်စေကာ (တရားကျင့်သုံးရန်) ထက်သန်ရွှင်လန်းစေအပ်သော သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူသည်ကွယ်လွန်ပါပြီ။ ထိုသုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူ၏ လားရာဂတိကား အဘယ်ပါနည်း? တမလွန်ဘဝကားအဘယ်ပါနည်း''ဟု လျှောက်ကုန်၏။
ရဟန်းတို့ သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူသည်ပညာရှိ၏။ တရားအားလျော်သောအကျင့်ကို ထိုးထွင်း၍ သိ၏။ တရားတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ငါဘုရားကို မပင်ပန်းစေ၊ ရဟန်းတို့ သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူသည်သံယောဇဉ်သုံးပါးတို့ကုန်ခြင်းကြောင့် ဖရိုဖရဲ ပျက်စီးကျရောက်ခြင်းသဘောမရှိသော ကိန်းသေမြဲသော အထက်မဂ်သုံးပါးလျှင်လဲလျောင်းရာရှိသော သောတာပန်ဖြစ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
ဤသို့ မိန့်တော်မူသော်ရဟန်းတစ်ပါးသည်မြတ်စွာဘုရားကို ''အသျှင်ဘုရား သုပ္ပဗုဒ္ဓကလူနူသည်လူတကာတို့ထက်ဆင်းရဲရခြင်း အထီးကျန်ရခြင်း ချို့တဲ့ရခြင်း အကြောင်းကား အဘယ်ပါနည်း? အထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်း''ဟု (လျှောက်၏)။
ရဟန်းတို့ ရှေး၌ ဖြစ်ဖူးသည်ကား သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူသည်ဤရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ပင် သူဌေးသား ဖြစ်ဖူး၏။ ထိုသူဌေးသားသည်ဥယျာဉ်သို့ ထွက်လတ်သော် (ရာဇဂြိုဟ်) မြို့သို့ ဆွမ်းခံဝင်သောတဂ္ဂရသိခီပစ္စေကဗုဒ္ဓါကို မြင်၍ ''ဤသူသည် အဘယ်သူနည်း? လူနူသည်လူနူအဝတ်ဖြင့် လှည့်လည်၏''ဟု ကြံစည်ပြီးလျှင်တံတွေးထွေးကာ အရိုအသေ မပြုဘဲ ဖဲသွား၏။ ထိုသူဌေးသားသည်ထိုကံ၏ အကျိုးကြောင့် အနှစ်အရာ အနှစ်အထောင်အနှစ်အသော င်းတို့ပတ်လုံး ငရဲ၌ ကျရောက်၏။ ထိုကံ၏ အကျိုးကြွင်းကြောင့် ပင်လျှင်ဤရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ လူတကာတို့ထက်ဆင်းရဲသော အထီးကျန်သော ချို့တဲ့သော လူနူဖြစ်၏။ ထိုလူနူသည်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်သော သုတ်အဘိဓမ္မာ ဝိနည်းကိုမှီငြမ်းပြု၍ယုံကြည်မှု 'သဒ္ဓါ'ကို ဆောက်တည်၏။ စောင့်ထိန်းမှု 'သီလ'ကို ဆောက်တည်၏။ အကြားအမြင် 'သုတ'ကို ဆောက်တည်၏။ စွန့်ကြဲမှု 'စာဂ'ကို ဆောက်တည်၏။ ပညာကို ဆောက်တည်၏။ ထိုလူနူသည်မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သော သုတ်အဘိဓမ္မာ ဝိနည်းကိုမှီငြမ်းပြု၍ယုံကြည်မှု 'သဒ္ဓါ'ကို ဆောက်တည်သောကြောင့် စောင့်ထိန်းမှု 'သီလ'ကို အကြားအမြင် 'သုတ'ကို စွန့်ကြဲမှု 'စာဂ'ကို ပညာကို ဆောက်တည်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ သေပြီးသည်မှနောက်၌ ကောင်းသော လားရာဖြစ်သောတာဝတိံသာနတ်တို့၏ အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သော နတ်ပြည်သို့ ရောက်၏။ ထိုသုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူသည်ထို တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ အဆင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အခြံအရံဖြင့်လည်းကောင်း့တစ်ပါးသော နတ်တို့ထက် လွန်၍ တင့်တယ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤအကြောင်းအရာကို သိတော်မူ၍ ထိုသိသောအချိန်၌ -''မျက်စိအမြင်ရှိသူသည် လုံ့လဝီရိယရှိလတ်သော်မညီညွတ်သောအရပ်တို့ကို ရှောင်ကြဉ်သကဲ့သို့ ဤအတူ သတ္တလောက၌ ပညာရှိသောသူသည် မကောင်းမှုတို့ကို ကြဉ်ရှောင်ရာ၏''ဟု ဤဥဒါန်းကို ကျူးရင့်တော်မူ၏။